> Resource > Talooyin > Samee Dhalashada Martiqaad Cards for Baby ee First Dhalashada
Sidee mar Duulay! Ka dib markii lagu dhawaaqay dhalashada ilmaha, waxa ay haatan u yimaado si dhalashadiisa koowaad ee amiir yar ama amiirad. In ay hal sano ee la soo dhaafay, iyadoo xubinta cusubi ay ka mid ah qoyskaaga kana soobixiya wax xiiso badan iyo farxad in qoyska oo idil. Iyo inuu soo dhawro maalinta gaar ah, oo haysta dhalashada noqon doonaa lagama maarmaanka ah. Diritaanka gaar ah oo qurux badan card casuumad dhalashada ilmaha waxay muujinaysaa ixtiraamka aad martida. Oo halkan waxaad ka heli doontaa qaar ka mid ah martiqaad dhalashada talooyin card iyo fikrado waxtar leh.
Kaarka martiqaad dhalashada ilmaha marka hore waa in ay sida gaarka ah iyo khaaska ah ee ilmahaaga. Samaynta card casuumad collage sawir waa fikrad collage sawir gaar ah oo awood leh si ay ugu yeedhi saaxiibadaa iyo qoyskaaga inaad ka qaybqaadato dhalashada ilmahaaga. Waxaa loogu talagalay ilmahaaga photos jecel badan oo macluumaad ah ee loo baahan yahay inaad u sheegto. On helo kaararka dhalashada martiqaad sida, dadka ka muuqan doontaa maalinta iyo ilmahaaga siin rabitaanka inta badan daacad ah. Samaynta collage sawir ilmahaaga ama ilmaha scrapbooking digital waa kaliya mid kaamil ah!
Haya- Talooyin Dhalashada Martiqaad Card
Ku dar wordings martiqaad ah oo bilicsan oo loo sameeyo kaarka dhalashada khaaska ah. Waa adag tahay in la raadiyo wordings martiqaad dhalashadiisa cusub, laakiin macluumaadka soo socda lagu dari karaa ugu fiican.
Ugu horrayn waxa weeyi waa in aad hadli magaca gabadha wiilka / dhalashadiisa dhalashadiisa in kaarka martiqaadka.
Ha iloobin taariikhda dhalashada iyo waqtiga at kaas oo aad rabto in aad martidaada in ay garoonkaas.
Ha illoobin goobta dhalashada iyo haddii loo baahdo siiyaan tilmaamaha ama khariidad yar.
Haddii ay tahay koox ka mid ah Kiinteistö, si hufan xuso ku saabsan xeerka dharka qorsheysan iyo jeesada.
Fikrad kale oo hal abuur leh waa in la abuuro card casuumad dhalashada video ah. Si tan loo sameeyo, DVD Muqaal dhise waa waxa aad u baahan tahay. Halkan waxa aad kala soo bixi kartaa oo ay tijaabiyaan.
Sida loo sameeyo a Shakhsiga Business Martiqaad Card
Baby sawrirrada Fikradaha in Samee Custom Baby Scrapbooks
3 Talaabada inay dar 'Raadi na on Facebook' Button in Website